Romaa'l Patel - Tale mpitantana ny tetik'asa | Provident Estate
Tale mpitantana ny fitantanana
"Ny portfolio dia mihamitombo haingana avy amin'ny referrals, mirary sy mino ny vokatro aho, ary ity dia maneho rehefa mipetraka aho ary miresaka amin'ny mpanjifa ho avy, hahatakatra ny fepetra takian'izy ireo amin'ny antsipiriany, ary manolotra azy ireo ny fanompoana manokana."
Niditra tao amin'ny Real Estate aho ary nifindra tany Dubai tamin'ny 2011 noho ny "lozabe", ary ny ankamaroan'ny olona dia manomboka amin'ny fialantsasatra fotsiny, na dia haingana be aza ny fisintonana mankany amin'ny fiainana any Dubai ary nanapa-kevitra ny hitondra 'fahafahana' amin'ny fahafahana miasa ao amin'ny Real Estate. Nialako ny asako tany UK noho ny Sales Manager ho an'ny toeram-pandihizana malaza ary nanao ny fihetsika.
Niaritra fampidirana sarotra ho an'ny Real Estate aho ary nahita fa tsy mora tahaka ny nataon'olon-kafa, ny fanovana ny fomba fiainany, dia niverina tamin'ny fotony aho ary nahatalanjona tamin'ny fomba mahatalanjona.
Nampahafantariko ny tolotra VIP ho an'ireo mpanjifako aho, izay manaporofo ny maha-zava-dehibe ny fahombiazako. Ireo mpanjifam-pandaminana izay mamerina ny mpampiasa dia tsy afaka mandà izany fahafaha-manao izany raha hanolotra serivisy manomboka ny fanombohana azy, ny fivarotana iray izay haveriko indray mandeha indray.
Rehefa nifampiraharaha tamin'ireo mpanjifako miverimberina dia natoky ahy izy ireo tamin'ny fitantanana ny tranon'izy ireo tokana, navotsotra, nandao ny fanaraha-maso, nanampy tamin'ny fisoratana anarana tamin'ireo mpanome tolotra mpanome fanampim-panafody rehetra, nangataka ny fangatahana fanamafisana, indrindra fa na inona na inona mifandraika amin'ny fananana, ity namela ny mpampiasa ahy hipetraka sy hijinja ny valisoa amin'ny ROI tsy misy fiatrehana.
Ny fanehoan-kevitra azoko avy amin'ireo mpitrandraka vaovao nidirany tao amin'ny trano, dia niroborobo be, tian'izy ireo ny serivisiko sy serivisy any UK, izany no fotoana nahitako ny "Ah ha" fotoana raha nahita nosy iray teny an-tsena, raha nitombo ny portfolio-n'izy ireo , Nanitatra ny departemanta aho, nampiofana ny ekipako hanolotra ny serivisy VIP ihany.
Ny portfolio dia mihamitombo haingana avy amin'ny referrals, mirary sy mino ny vokatro aho, ary ity dia maneho rehefa mipetraka aho ary miresaka amin'ny mpanjifa ho avy, hahatakatra ny fepetra takian'izy ireo amin'ny antsipiriany, ary manolotra azy ireo ny fanompoana manokana.
Amin'ny alàlan'ny fahalalako manankarena, ny fanatontosana ny filàn'ny mpanjifa sy ny fahafahako manao fihetsika dia manana laza malaza ao amin'ny tsena fiteteam-bidy any Dubai aho, amin'ny maha-mpikarakara sy mpandraharaha ara-tsiantifika ahy, manana ny toetra rehetra hananganana ny bar sy ny tanjaka to strength.
Mba ho lasa mpikambana ao amin'ny portfolio fampiroboroboana, dia tsidiho ny 04 323 3609 (landline) na 056 790 7966,